Baarlamaanka Galmudug oo la kala dirayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Deegaanada Galmudug waxaa kusoo fool leh doorashada hoggaanka Maamulkaas in kastoo haatan lagu kala aragti duwan yahay xilliga ay dhaceyso doorashada,sidoo kalena Madaxweyne Xaaf uu kasoo horjeedo in haatan la qabto doorasho.
Dhinaca kale Madaxweynaha Galmudug garabka lagu doortay Cadaado Axmed Maxamuud Baasto ayaa sheegay in 4-ta Bil ee soo socota Gudaheeda la kala diri doono Xildhibaanada,sidoo kalena la soo xuli doono Xildhibaano Cusub si ay u dhacdo doorashada Madaxweynaha Galmudug.
Waxa uu sheegay in laga maarmaan ay tahay in la kala diro Xildhibaanada,isla markaana doorashada rasmiga ah ee Madaxweynaha Galmudug ay sida ugu dhaqsiyaah badan ay ku dhici doonto,waxana uu sheegay in qof walba oo reer Galmudug ah uu isku diyaariyo doorashadaas.
Khilaafka u dhaxeeya Madaxda Maamulka Galmudug ayaa weli taagan waxaana xusid mudan in ay ku kala Shaqeeyaan Magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud,waxaana Madaxweynaha Galmudug Xaaf uu ku cel celiyey inay faragelin ku heyso dowladda Federaalka Soomaaliya.
UK envoy submits his credentials to Somali President